Vanasahwira Vakuru, veMyZororo, Vobatsira Vanoshaikira Kunze kweNyika
Vakawanda vari kushaikira kunze kwenyika vanonzi vari kunetsekana kuti varadzikwe nyore bejuda kwekusavepo kwemari inokwana
Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri kugara kunze kwenyika zvinoshaikirako, zvinonzi zviri kugumisira zvavigwako nekuda kwemutoro unenge wavepo wekuti zviendeswe kumusha kunovigwa pane hama dzavo.
Matambudziko anonzi anonyanyotarisana nemhuri dzakawanda dziri kunze kwenyika dzinorasikirwa nehama neshamwari anosanganisira kukundikana kuunganidza mari dzakawanda dzinodiwa kuti munhu anovigwa kumusha, izvo zvinozoita kuti apedzesere angovigwa kwaanenge ashaikira.
Mhuri dzakawanda dzinorasikirwa nevadikani vadzo dziri kusara dzichishaya pekutangira, zvikuru kana mufi ari iye anga akabata mhuri.
Matambudziko aya anonzi anozonyanyowedzerwawo nemakakava anenge avepo pakati pevemhuri vari kunze nevemhuri vari kumusha, avo vanonzi vanenge vachida kuti hama yavo inovigwa kumusha pakavigwa vamwe vedzinza.
Izvi zvinonzi zviri kuzoita kuti vari kunze vakawanda vanetsekane kuunganidza mari dzekutakura vafi, pamwechete nevanoperekedza mumwe wavo, vangave madzimai nevana kana shamwari, voguma vave kuita mudemhe-mudemhe.
Apa ndipo panopinda masangano anopa rubatsiro pamatambudziko akadai, akaita seMyZororo, sangano rinobatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshaikira kunze kwenyika, zvikuru kuSouth Africa, richishanda nekambani yeMoonlight Funeral Assurance & Services.
Mumwe wevakavamba kambani yeMyZororo, VaAgony Zhou, vanoti havasarure kuti vobatsira ani pazvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvashaikira kuSouth Africa.
"Tinobatsira munhu wese anobva kuZimbabwe, whether anga ari nhengo yedu, kana kuti haasi nhengo yedu tinomubatsira," VaZhou vanodaro.
Vanoti kambani yavo yeMyZororo inokwanisa kubatsira nekumupa yavanoti funera cover kana anga asina achiida.
Pamusoro pezvo, mufi anobatsirwa nemotokari inotakura bhokisi, imwe inotakura hama dzake, uye kufambira magwaro ose anodiwa kuti mutumbi ubude muSouth Africa kuenda kumusha.
VaZhou vanoti kambani yavo ine hurongwa hwekubatsira zvizvarwa zvenyika dzose dzemudunhu reSADC pamwewo nezvekunyika dzinoti Nigeria neGhana mumwedzi mishoma inotevera.
Hurukuro naVaAgony Zhou